Wasaarada arrimaha gudaha ee Puntland oo soo bandhigtay buug qeexaya hannaanka wax iibsiga ee dawladaha hoose ee Puntland. – Radio Daljir
Wasaarada arrimaha gudaha ee Puntland oo soo bandhigtay buug qeexaya hannaanka wax iibsiga ee dawladaha hoose ee Puntland.
Luulyo 6, 2010 12:00 b 0
Gaorwe, July 06 – La taliyaha wasaarada arrimaha gudaha & dawladaha hoose Axmed Cismaan Adam oo ka waramay hindisaha cusub ayaa sheegay in uu yahay halbeeg caalami ah oo ay iska kaashanayaan hay’ada ILO.
Gudd. gobolka Mudug oo uga digay maamulka, Issimada, ganacsatada & shacabka Galkacyo lagacta faalsada ah.
Xalima M. Faarax, madaxa dallada nabadayna ee Puntland oo aan ka waraysanay safar nabadeed oo ay ugu baxeen Uurjire/Duudhooyo.